Qarax khasaare nafeed geystay oo ka dhacay waddada Wadnaha ee Muqdisho – Radio Muqdisho
Qarax khasaare nafeed geystay oo ka dhacay waddada Wadnaha ee Muqdisho
Sadex ruux oo rayid ah ayaa dhimatay afar kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta gaari dad shacab ah ay saarnaayeen lagu qarxiyay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, sida uu Radio Muqdisho u xaqiijiyay sarkaal ka tirsan maamulka degmada.
Xoghayaha maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, Maxamuud Cabdi Maalin, ayaa sheegay in sadexda qof ee dhintay labo kamid ah ay ahaayeen gabar iyo hooyadeed halka qof kale uu ahaa rag, waxaana qaraxa uu ka dhacay xaafadda Xaawo Taako ee degmadaas.
“Waxaa dhacay qarax aan u malaynayno in uu yahay miino oo ka dhacay suuqa bakaaraha gaar ahaan meel u dhow saldhiga booliiska ee degmada, wararka aan helnay waxaa ku dhintay gabar iyo hooyadeed iyo nin kale,” sidaa waxaa sheegay Maalin.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxan maanta lagu laayay dadka shacabka ah, hase yeeshee weerarada noocaan ah ayaa waxaa fuliya maleeshiyaadka Al-shabaab oo sidan oo kale horey baabuur dad shacabka ah la socdaan qaraxyo waddada ugu xirey.
Dowladda Masar oo dib u furtay marinka Rafax
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay ku simaha safiirta Qatar ee Soomaaliya-Sawirro